कस्तो छ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ चढ्ने विमान ? « Postpati – News For All
कस्तो छ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ चढ्ने विमान ?
असोज २६, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ शनिबार एयर चाइनाको प्रेसिडेन्टल जेट विमान बोइङ ७४७–४०० मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी २ दिने राजकीइ भ्रमणका क्रममा काठमाडौंमा छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण तयारी स्वरुप गएको असोज १५ गते चिनियाँ विशेष विमान नेपाल आएर फर्किएको थियो ।
विशेषगरी विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुखहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा उच्च सुविधायुक्त विमानको प्रयोग गर्दछन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रयोग गर्ने विमान कस्तो छ त ?
राष्ट्रपति सीका समकक्षीहरुको विभिन्न वैकल्पिक विमान भए पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङसँग भने आफ्नो छुट्टै निजी विमान छैन ।
जन गणतान्त्रिक चीनका नेता सीले आफ्नो सरकारी भ्रमण र व्यापार यात्राका लागि एअर चाइनाको बोइङ ७४७–४०० दुइटा विमान प्रयोग गर्दै आएका छन् । निर्माणको समयमा एउटा विमानको मूल्य २५० मिलियन डलर थियो ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ विदेश भ्रमणबाट स्वदेश फर्किसकेपछि ती विमान एअर चाइनालाई दिइन्छ र फेरि नियमित यात्रु उडानका लागि प्रयोग गरिन्छ ।